निरन्तर बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? Canada Nepal
निरन्तर बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं - मंगलबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार तोलामा ३ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा २ सय रुपैयाले बढेको हो । यसअघि आइतबार पनि सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाले बढेको थियो ।
सोमबार प्रतितोला ९२ हजार ४ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९२ हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । यसअघि सोमबार चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रुपैयाले बढेको थियो । आज चाँदीको मूल्य स्थिर रही तोलाको १२ सय ६५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
कार्तिक ९, २०७८ मंगलवार ११:५६:३५ बजे : प्रकाशित